रुस विश्वकप : मेस्सी, रोनाल्डोका चुनौती र अवसर (भिडियो रिपोर्ट), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
रुस विश्वकप : मेस्सी, रोनाल्डोका चुनौती र अवसर (भिडियो रिपोर्ट)
एजेन्सी । विश्व फुटबलको महासंग्राम रुस विश्वकप २०१८ आजबाट सुरु भएको छ । यस विश्वकप एक दशक यता व्यवसायिक फुटबलमा एक छत्र राजगर्दै आएका अर्जेन्टिनी कप्तान लियोनल मेस्सी र पोर्चुगिज कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोकालागि अझ विशेष रहनेछ ।
मेस्सी र रोनाल्डो क्रमश स्पेनिस क्लव बार्सिलोना र रियल मड्रिडबाट खेल्छन् । दुवैले फुटबलमा पाउन पर्ने सबै किसिमका उपाधि हात पारिसकेका छन् । यी दुवै विश्वका उत्कृष्ट फुटबलरहरु हुन् भन्नेमा कुनै शंका छैन् ।
खेल विश्लेषकहरु एक दशकसम्म यीनीहरुको छायाँमा अन्य खेलाडी पर्नुले यी दुवै खेलाडी विश्वकै अद्भूत खेलाडी भएको धारणा राख्छन् । यद्यपी को उत्कृष्ट भन्नेमा सँधै खेल समर्थक र फुटबल पण्डितहरुमा पनि मत भिन्नताहरु देखिन्छ ।
रुस विश्वकप २०१८ यतिबेला मेस्सी र रोनाल्डोका लागि चुनौती र अवसर भएर आएको छ । के यिनीहरुले विश्वकपमा उल्लेखनीय प्रदर्शन गर्न सक्लान त भन्नेचाँही विश्वकपको प्रदर्शनलेनै देखाउँनेछ ।
यद्यपी क्लवको खेलहरुमा दुवैको प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेकाले विश्वकपमा पनि दुवैको प्रदर्शन विशेष रहने अनुमान गरिएको छ ।
मेस्सीले मुख्य गरी पाँच पटक फिफा बालुन डि ओर अवार्ड, पाँच पटक युरोपियन गोल्डेन बुट अवार्ड सहित अन्य दर्जनौ उपाधिहरु हात पारेका छन् । मेस्सीले व्यवसायिक फुटबल खेल्दै गरेका क्लव बार्सिलोनालाई ४ पटक च्याम्पियन्स लिगको उपाधि दिलाएका छन् ।
यस्तै मेस्सीले बार्सालाई ९ ला लिगा, ७ सुपर कोपा डि स्पेनो, ६ कोपा डेल रे कप, ३ युइएफ ए सुपर कप र ३ फिफा क्लव विश्वकपको उपाधि गरी ३२ उपाधि दिलाएका छन् ।
मेस्सीका अविस्मरणीय खेलहरु भनेका उनले सन् २००५ मा अर्जेन्टिनालाई अन्डर २० विश्वकप फुटबलको उपाधि दिलाएका थिए । मेस्सीले सन् २००८ मा चिनमा भएको ओलम्पिकमा फुटबलमा अर्जेन्टिनालाई स्वर्ण पदक समेत दिलाएका थिए ।
मेस्सीले सन् २०१४ को ब्राजिल विश्वकपमा अर्जेन्टिनालाई उपाधि नजिक पु¥याएपनि उपाधि भने चुमाउन सकेनन् । यस्तै मेस्सीले अर्जेन्टिनालाई ३ पटक कोपा अमेरिकाको फाइनलमा पु¥याइ सकेका छन् ।
तर त्यसमा पनि अर्जेन्टना उपविजेतामा सीमित बनेको छ । अर्जेन्टिना म्याराडोनालाई पनि पछि पार्ने खेलाडी हुन् । उनले अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय टोलीबाट सर्वाधिक ६४ गोल गरेका छन् । लेजेन्ड रिटाएर्ड म्याराडोनाले भने मात्र ३४ गोल गरेका छन् ।
यद्यपी सबै उपाधि दिलाए पनि मेस्सीको लागि विश्वकप उपाधि नजित्नु दुर्भाग्य बन्नेछ । केहिदिन अघिमात्र ब्राजिलका विश्वकप विजेता रिभाल्डोले मेस्सीले विश्वकप जिताए उनी फुटबलका हिरा सावित हुने बताइसकेका छन् ।
तर विश्वकप नजिताए उनी म्याराडोनाको तुलनामा नआउने उनको धारणा थियो । त्यसैले यसपटकको विश्वकप जिताउन चुनौती भएपनि उनले खेल जिताए उनी विश्व फुटबलकै एक हिरा सावित हुनेमा कुनै द्धुविधा छैन् । विश्वकपमा छनौट भएको टोली भएका हुनाले मेस्सीलाई यस विश्वकप आफुलाई उत्कृष्ट सावित गर्ने अवसर पनि हो ।
मेस्सी जस्तै रोनाल्डोपनि फुटबलमा पाउनुपर्ने सबै उपाधि हात पारिसकेका खेलाडी हुन् । तर रोनाल्डोलेपनि आफ्नो टोलीलाई विश्वकप उपाधि दिलाउन सकेका छैनन् । रोनाल्डो मेस्सी समान पाँच पटक बलुन डि ओर अवार्ड पाउने खेलाडी हुन् ।
उनले चार युरोपियन गोल्डेन बुट सहित दर्जनौं उपलब्धि हासिल गरेका छन् । रोनाल्डोले राष्ट्रिय टोलीका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपाधि युरोकप २०१६ दिलाएका छन् । रोनाल्डो राष्ट्रिय टोलीबाट सर्वाधिक गोलगर्ने खेलाडी हुन् ।
उनले ८१ गोल गरेका छन् । उनी गोल मसिनका रुपमा परिचित खेलाडी हुन् । रोनाल्डो सबैभन्दा धेरैपटक च्याम्पियन्स लिग जित्ने खेलाडी समेत हुन् । उनले म्यानचेस्टर युनाइटेड एक पटक र रियल मड्रिडबाट ४ पटक गरी पाँच पटक च्याम्पियन्स लिग उपाधि हात पारेका छन् ।
रोनाल्डोले युनाइटेडबाट ३ प्रिमियर लिग, २ फुटबल लिग कप, एक एफए कप, एक क्लव विश्वकप र एएफ ए कम्युनिटी शिल्ड गरी ९ उपाधि जितेका थिए ।
त्यस्तै रोनाल्डोले रियल मड्रिडबाट २ ला लिगा, २ कोपा डेल रे, २ सुपर कोपा, २ सुपर कप र २ क्लव विश्वकप गरी १४ उपाधि जितिसकेका छन् । तर सर्वाधिक सफल खेलाडी भएपनि राष्ट्रिय टोलीलाई विश्वकप जिताउन नसक्नु रोनाल्डोको पनि मेस्सीकै जस्तो एक दुर्भाग्य हो ।
यस रुस विश्वकपले दुवै खेलाडीको उत्कृष्टपनको मापन समेत गर्ने फुटबल विश्लेषकहरु बताउँछन् । विश्वकपमा समान ३–३ खेल खेलेका ३० वर्षिय मेस्सी र ३३ वर्षिय रोनाल्डोको क्रमश ५ र ३ गोलमात्र छ ।
गत सिजन निकैनै फर्ममा रहेका दुवै खेलाडीका लागि यस विश्वकप अवसरसँगै चुनौती पनि हो । दुवै खेलाडीको उत्कृष्टतामा पनि कुनै शंका छैन् । तर यस उमेरसम्म आइपुग्दा विश्वकप नजित्नुले दुवैको नाम पेले, म्याराडोना, जिदान, रोनाल्डो नाजेरिया, रोनाल्डिन्होसँगै नआउने पो होकी भन्ने चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ ।
कुनै एक देशले विश्वकप त जित्छनै तर यदी अर्जेन्टिना र पोर्चुगल मध्य कुनै एक देशले विश्वकप जिते यी खेलाडी मध्ये एकको नाम विश्व फुटबलको इतिहासमा अझै सुनौलो अक्षरले लेखिने थियो ।